UK piles pressure on Zimbabwe policy change - IndAfrica
UK piles pressure on Zimbabwe policy change
Two butterflies with flags on wings as symbol of relations UK and Zimbabwe
UK tells Zimbabwe: No policy reforms, no cooperation. Zimbabwean delegates attending the Geneva Trade Policy Review last week were bluntly told by the United Kingdom Ambassador to the World Trade Organisation (WTO) and United Nations (UN), Julian Braithwaite that for the UK to cooperate with Zimbabwe, Zimbabwe had to implement policy reforms first, News of the South reports.
Braithwaite reportedly said: Meaningful progress on reforms, along with respect for human rights and the rule of law, are the only way to sustainably deal with Zimbabwe’s underlying challenges, unlock significant investment and bring about a better future for Zimbabwe and its people.
We continue to urge Zimbabwe to guarantee the independence of the Anti-Corruption Commission and the courts. However, Braithwaite praised Zimbabwe in trying to resolve the land disputes that stemmed from the infamous land reform program and for controlling the runaway exchange rate and said:
We (however) encourage Zimbabwe to take credible steps to ensure the viability and security of tenure in the 99-year leases, stop further farm invasions, ensure continued progress on compensation and guarantee respect for court decisions on property rights disputes.
More airlines to withdraw flights to SA